Manomboka ny antsojay
Manomboka sahady ny antsojay amin’ireo mpanao gazety tsy mitovy hevitra amin’ny filoham-pirenena vaovao sy ireo mpiaradia aminy. Io sotasota amin’ny mpanao gazety io no efa nampikolay tamin’ny tetezamita farany teo anefa.
Nahagaga fa raha ny 8 janoary 2019 teo no nambara tamin’ny fomba ofisialy fa lany ho filoham-pirenena i Andry Rajoelina dia ny 7 janoary kosa no daty voasoratra tao amin’ny taratasy fiarahaban’ny filoham-pirenena kameroney. Tsy hitombina anefa hoe hisy elanelany 24 ora be izao ny ora any sy ny eto an-toerana.
Miandry ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon’ny filoham-pirenena vaovao izany ankehitriny ny rehetra. Ho hita eo mialoha ny fankalazana ny 26 jona raha hisy fototra tranobe ho tafatsangana tokoa kanefa tsy handrodanana tranon’olon-tsotra.